Nzira dzekubatsira Wiricheya Mushandisi | Karman® Mawiricheya
Shamwari yako kana mudiwa mune wiricheya uye uri kushamisika kuti ungavabatsira sei? Kana iwe uchida kuvabatsira mune dzimwe nzira, iwe unofanirwa kutanga unzwisise izvo zvakakosha zvikamu zve wiricheya.
Kuziva zvikamu zvekutanga uye chimiro chechigaro kunobatsira nekubata nemazvo wiricheya.
Kana uchibata zvakanaka a wiricheya, ita chokwadi chekubata zvakasimba mubato.
Kunyangwe iwe uchikwira kana kudzika masitepisi, iwe waizodaro inowanzo tenderera ari wiricheya uye chiyero neshure mavhiripu. Shandisa muviri wako uye huremu kubatsira kuchengetedza chigaro chemuviri.
Nekudaro, chinhu chekutanga chaungaite kuvabatsira kubvunza kuti ungabatsira sei. Hakusi kungova nehunhu uye nehanya chete, asi zvinoratidza kuti unowanikwa kwavari pasina kudarika.
Usabata mumwe munhu 'sairicheya pasina mvumo yavo. Icho chiri kuwedzera kwekuwedzera kwemunhu iyeye uye chiri mukati mekamuri ravo rega.
Mushure mekunge iwe wabvunza uye ivo vakuudza kuti ivo vanoda rubatsiro pano pane chimwe chinhu, heano mashoma matipi uye manomano ekuchengeta mundangariro.
Kana iwe ukakumbirwa kuvabatsira kubva pamharadzano, ita shuwa yekutaura zvakajeka navo zvauri kuita. Kunyangwe iri tilting chigaro kana kufambisa pasi nhanho, kutaurirana kwakakosha.
Unofanira kuzviwana iwe pushing ari wiricheya, gara uchiedza anotsvedzerera uye akapfava inofamba ichidzivirira kumhanyisa kana kubata nehasha. Paunenge usina chokwadi, ingobvunza kuti ivo sei ivo vanofarira kufambiswa kana kusimudzwa.
Rangarira, mikana yekuti ivo vanoziva yavo sachigaro zviri nani kupfuura iwe uri kumusoro saka usatya kukumbira kubatsirwa kana uri kupeta kana kusunungura chigaro chavo.
Vape madhairekisheni akajeka nezve daro, mamiriro ekunze, uye chero zvipingamupinyi zvepanyama zvinogona kukanganisa kufamba kwavo.
Vabatei sevamwe vese nekuti ivo vachiri munhu akafanana newe. Vabate nenzira imwecheteyo yaunotarisira kubatwa iwe. Ivo vachiri munhu mumwe chete wawakagara uchiziva.
batsira kudzivirira ivo kubva kudonha kana kudonhedza nekuchengetedza pasi nepasi pasisina mutsindo. Kana vari kuuya kumba kwako, chengeta uriri hwako hwakachena uye hwakajeka. Kana iwe urikubuda uye ukaona chipingaidzo chavangasaone, chibvise munzira.